TAEKWON-DO-« ITF »: hamarana amin’ny fomba miavaka ny taona 2018 | NewsMada
TAEKWON-DO-« ITF »: hamarana amin’ny fomba miavaka ny taona 2018
Eo am-pamaranana ny taom-pilalaovana 2018 ny eo anivon’ny fikambanan’ny ITF “International Taekwon-do Federation Madagascar Association”. Manoloana izany, hetsika roa goavana no tanterahina. Nosantarina tamin’ ny famindrana grady izay efa fanao isan-taona sy isaky ny volana desambra toy izao, ny hetsika ho famaranana ny taom-pikatrohana 2018. Misitraka izany fampiakarana grady izany avokoa ny tempany rehetra ka natomboka tamin’ny tempany mena sy mainty miakatra “1er Dan” amin’ny tempany mainty izany, ny faran’ny herinandro lasa teo. Hetsika notontosaina teny Betongolo. Nandritra izany, mpikatroka miisa 4 mianadahy no nahazo izany. Niisa 3 mianadahy kosa ireo “1er Dan” nifindra “2e Dan” ary nahazo fanavaozana grady ho iraisam-pirenena ihany koa izy ireo. Mbola hitohy hatramin’ny faran’ny herinandro izao ity famindrana grady ity, raha ny fanazavana nentin’ny Sabum Rakotoarison Tafita, mpanazatra eo anivon’ny ITF.
Ankoatra izay, hetsika faharoa karakarain’ny ITF ho famaranana ny taona 2018, ny fanaovana tombana ny zava-bita nandritra ity taom-pikatrohana ity. Eo ihany koa ny fametrahana ny tetikasa ho amin’ny taona 2019, araka ny fanazavana hatarany. Tetikasa izay antenaina mba hampivoatra ho amin’ny tsaratsara kokoa ny vokatra ho an’ny fikambanana ITF.
Nanambara ny hafaliam-pony tamin’ny vokatra azon’ny mpikatroka ny mpitantana ny ITF, tao anatin’izay 12 volana izay ka izany indrindra no hikarohana hanatsarana ny fahaiza-manaon’ireo mpikatroka. Anisan’ny vokatra tena nahafa-po ny medaly volamena azon-dRazanajatovo Orima tamin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika sy ny medaly maeo azon’ny solontena malagasy ka nahazoana ny laharana faharoa aty Afrika amin’ny taranja Taekwondo, raha ny nambaran-dRakotoarisoa Tafita hatrany. Ity farany izay voatendry ho mpanazatra iraisam-pirenena rahateo, tamin’ity taona ity ka vao maika nampitombo ny lentan’ny mpikatroka eo anivon’ny ITF izany.
Raha ny tapaka, hanomboka ny volana martsa 2019 izao ny taom-pikatrohana 2019 ary hosantarina amin’ny katroka ady sy ny fiofanana, hisafidianana izay hisolo tena amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena izany.